‘अहिले पनि म जस्ता युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउने हो भने ऊर्जाशील समय खेर जान्छ’ - Awajonline Online Newspaper
‘अहिले पनि म जस्ता युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउने हो भने ऊर्जाशील समय खेर जान्छ’
२०५७ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघबाट काँग्रेस राजनीति सुरु गरेका दावा शेर्पा ताराबहादुर कोइराला नेपाली काँग्रेस दोलखाको सभापति हुँदा पार्टीको आमन्त्रित जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बन्नु भयो । पदमा नभए तापनि तरुण दल, नेवि संघ र पार्टीको हरेक कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् । १३ वर्ष पछि हुन लागेको तरुण दल देलखाको अधिवेशनमा शेर्पाले पनि आफूलाई अध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा घोषणा गरेका छन् । प्रस्तुत छ तरुण दलअध्यक्षका उम्मेद्वार दावा शेर्पासँग आवाज अनलाइनले गरेको कुराकानी…
अरु बेला चुपचाप हुने काँग्रेस र तिनका भातृ संगठन अधिवेशनको बेलामा मात्र चहलपहल हुन्छ तरुण दलमा पनि त्यस्तै होइन ?
यो भन्दा अघिको तरुण दलको गतिविधि जे भए तापनि अब आउने नेतृत्वले सम्पूर्ण तरुणहरुको भावनालाई आत्मासाथ गर्दै जिल्लामा हुने सबै किसिमका गतिविधिमा दोलखा तरुण दलको सक्रिय भूमिका र दर्बिलो उपस्थितिको वातावरण तयार गर्छु । लामो समयसम्म एकै व्यक्ति नेतृत्वमा भएको र अधिवेशन नभएका कारण तरुण दलको सुस्तता जस्तो देखिएको हो तर तपाईले भने जस्तो होइन केही त भएकै छन् नि ।
यस भन्दा अघि निष्कृय तरुण दल अधिवेशनका लागि मात्रै किन यस्तो सक्रियता हो ?
यसभन्दा अघि पनि तरुण दल निष्कृय थिएन । जिल्लादेखि गाउँगाउँसम्म खेलकुद, सामाजिक क्रियाकलाप र पार्टीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । पार्टी कार्यकर्तालाई पर्ने जुनसुकै समस्या पर्दा पनि तरुण दल दोलखाले समाधान गर्दै आएको अवगतै छ ।
तपाई अहिलेसम्म तरुण दलको कुनै पनि भुमिकामा काम गर्नु भएको छैन, तर एकै पटक किन अध्यक्ष ताक्नु भएको हो ?
म तरुण दलको कुनै पनि आधिकारिक पदमा बसेर काम नगरे तापनि तरुण दलले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा अरु पदाधिकारीले निर्वाह गरेको भूमिकाभन्दा मैले कुनै कमी गरे जस्तो लाग्दैन । तरुण दलमा बसेर काम गर्नु भनेको समाजको सेवा गर्नु हो । तपाईलाई जानकारी नै छ हाम्रो तरुण दल २/३ वर्षमा नियमित अधिवेशन हुनु पर्ने हो तर १३ वर्षसम्म अधिवेशन हुन सकेन । अधिवेशन हुन नसक्नुको परिणाम हामी जस्ता धेरै ऊर्जाशिल तरुणहरु जिम्मेवारीको मौका पाएनन् । अहिले पनि म जस्ता युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउने हो भने ऊर्जाशिल समय खेर जान्छ । फेरि हाम्रो तरुण दलको विधानले तल्लो तहमा यो वा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि मात्र अध्यक्ष हुनु पर्छ भन्ने छैन । केबल नेतृत्व गर्न सक्ने र युवा परिचालन, संगठन विस्तार र पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थानीय, प्रान्तिय र संसदीय निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ त्यो खुबी ममा छ त्यसैले मैले आफूलाई अध्यक्षको रुपमा अघि सारेको हुँ ।
अध्यक्षका लागि तपाईसँगै अरु साथीहरुले पनि उम्मेद्वारको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ तर तपाईलाई नै किन तरुणहरुले नेता छान्नु पर्ने कारण के छ ?
अधिवेशनको मैदानमा त धेरैको नेतृत्वमा पुग्ने आँकाक्षा हुनु स्वभाविकै हो । तर नेतृत्व पाइसकेपछि उनीहरु जिल्ला बसेर काम गर्न तयार छन् कि छैनन् । हाम्रो परिपाटी नेतृत्व लिने अनि राजधानी फर्कने । यसरी संगठन चल्दैन । उहाँहरु अधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै नेताहरुसँगै राजधानी फर्कने, पाहुनाको रुपमा जिल्लामा आउने, पार्टी र संगठनका कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने तर अवसर कुनै पनि नछाड्ने र युवाहरुलाई समस्या पर्दा पनि पहल कदमी गर्नेसम्म हुँदैनन् । तर म त निरन्तर रुपमा जिल्लामा हुन्छु । गाउँ गाउँमा संगठन विस्तारमा लाग्छु । पार्टी कार्यकर्ता र तरुण विद्यार्थीको संरक्षण गर्छु । कार्यकर्ताहरुलाई पर्ने सबै किसिमका समस्या समाधानमा लाग्छु । त्यसैले म अरुभन्दा सक्षम र योग्य उम्मेद्वार हुँ ।
काँग्रेस र तिनका अन्य भातृ संगठनका गतिविधि सुस्त भएका अवस्थामा तपाईले भने जस्तो तरुण दललाई कसरी सशक्त बनाउनु हुन्छ ?
म तरुण दलको अध्यक्ष भएपछि वार्षिक क्यालेण्डर नै बनाएर काम गर्छु । गाउँदेखि वडा तहसम्मको तरुण इकाइ समिति गठन गर्छु । दोलखाका हरेक तरुण युवालाई तरुण दलप्रति आकर्षित गराउने कार्यक्रमहरु बनाउँछु र कार्यान्वयनमा ल्याउँछु । पार्टी नेताहरुलाई अघि लगाउँछु, उनीहरुको अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्दै तरुण युवाहरुलाई सिर्जनशिल काममा लगाउने छु ।